မြန်မာကက်သလစ်အသင်း (ဝါရှင်တန်ဒီစီဧရီယာ) : In memoriam of Joseph Seng Li
မြန်မာကက်သလစ်အသင်း (ဒီစီဧရိယာ) ကိုိ နိုဝင်ဘာလ(၂၆)ရက်၊၂ဝ၁၁ ဘောတီမိုး၊ မေရီလန်းတွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။အသင်းဖွဲ.စည်းရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မြန်မာကက်သလစ်အသင်းတော်ထဲတွင် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ချစ်ခင်ရင်းနှီးစေရန်၊ ဝိညဉ်ရေးနှင့်လူမှုရေး လိုအပ်တာတွေကူညီနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။အသင်း၏ရည်မှန်းချက်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ မြန်မာကာသိုလ်လိပ် ကွန်ဖရန်(အန်စီဘီအေစီ) လမ်းညွှန်မှုအောက်မှာ စည်းလုံးညီညွှတ်ကြံ့ခိုင်သောအဖွဲ.အစည်းဖန်တီးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
MEMBER'S PAGES (membership is required)
In memoriam of Joseph Seng Li
Joseph Seng Li
In memoriam of Joseph Seng Li eldest brother of Roi Ja Lahpai (Ah Ja) the wife of our Secretary Anthony Aung.
The honor of your presence is requested atamemorial service on this Saturday, the seven of March at seven o’clock.
1 Randolph Spring Ct
He passed away with Liver cancer on Tuesday (March 03, 2015) in Myitgina, Kachin State in Myanmar (Burma). He left his wife Twa Pan and his two daughters in Kachin State, Myanmar.
May His Soul rest in peace and Let’s pray for his soul.
MCA (DC area)၏ အတွင်းရေးမှူး တာဝန် ထမ်းဆောင် နေသူ ဦးအောင်အောင် ၏ ဇနီး မရော်ဂျာလဖိုင် (အားဂျာ) ၏ ချစ်လှစွာသော အကိုကြီး ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ တွင်နေထိုင်သူ Joseph Seng Li သည် မြန်မာစံတော် ချိန် မတ်လ (၃) ရက်နေ့်တွင်ခေါ်တော်မူခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။ ကွယ်လွန်သူသည် ကျန်ရစ်သူ Twa Pan ၏ခင်ပွန်းဖြစ်၍သမီး (၂) ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်ဟုကြားသိရပါသည်။
သို့ ဖြစ်ပါ၍ MCA ရှိဘာသာတူများအနေဖြင့်ကျန်ရစ်သူ မေရီလန်းရှိ ကွယ်လွန်သူ၏ညီမ Roi Ja lahpai (အားဂျာ) ထံသို့စုပေါင်းကာ ဆုတောင်းနှစ်သိမ့်နိင်ရန်အတွက် လူကြီးမင်းနှင့် တကွမိသားစုများအား ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
အချိန် -ညနေ (၇) နာရီ
မတ်လ (၇) ရက် ၂၀၁၅ (စနေနေ့)
MCA (DC area)
Download Myanmar font ဇော်ဂျီ မြန်မာစာလုံးယူရန်
အောက်ပါ အီးမေလ်သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
အို ဂရုဏာရှင် ယေဇူး - ကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်အား ယုံကြည် အားကိုးပါသည်။
ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ နာမတော်မြတ်၌ အာမင်။
Vatican Offcial website
Catholic Myanmar CANADA
Myanmar Catholic Community of Malaysia
Myanmar Catholic Community of Singapore
Myanmar Catholic from Malaysia
နော်ဝေး မြန်မာကက်သလစ် မိသားစု
Myanmar Catholic Communities
Myanmar Catholic Association (DC area)
အမေရိကန်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ မြန်မာကာသိုလ်လိပ် ကွန်ဖရန်
Oklahoma Myanmar Catholic Family
Burmese American Catholic Fellowship
( North Carolina ) နော့ကယ်ရီုလိုင်းနား မြန်မာ ကက်သလစ်
( Kentucky ) ကင်တာကီ မြန်မာတိုင်ရင်းသား ကက်သလစ်
မန္တလေး ကက်သလစ် ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ
The Diocese of Pekhon
အလင်းသက်သေ (မြန်မာကက်သလစ် ဘလော့)
Thank you for your time to visiting our Blog.. Watermark theme. Powered by Blogger.